motera roa manapitranditra farany vidiny roa mpanamboatra motera roa
Jiro elektrika 240 volt amidy
Mpanamboatra môtô kodiarana indostrialy roa, Crane Duty Motor, ho an'ny paompy, Double Shaft Motor ary Motera Electric Phase Electric iray natolotry Sogears.
China mpanamboatra motor Shaft Motor
Vonona ve ianao hividy môtô mandeha roa? Karazam-pifamoivoizana roa lela roa ambaratonga telo azo omena anao
Ireto misy sary vitsivitsy ho an'ny fanadihadihana anao.
Elatra mandeha alikaola AC
Doto roa motera AC misy baoritra fiasana izay manome torsiana tsara sy rpm amin'ny halatra ambany kokoa. tondra-drano roa vita amin'ny motera roa 380V toriteny avo lenta 100kg dc môtô dc maotera toradroa
Môtô DC iray misy boaty goavambe mifatotra amin'ilay motera, izay mandeha motika mandeha amin'ny herinaratra izay mandeha amin'ny motika mivantana (DC) .Motor miaraka amin'ny plastika misy RPG 150. AC moto roa mandeha amin'ny herinaratra izay natao ho an'ny ranomasina, automatique, fitaovana fanohanana ny tany, fitrandrahana.
Ity dikan-ity dia manana motera DC 12V voatosika amin'ny borosy karbonika efa ela ary misy vy vy 31.25: 1. Izahay dia manana lanja ary miditra amin'ny Double Shaft Blower Motors ho an'ny Bard, Marvair ary marika hafa.
Ity misy maro momba an'i DOUBLE SHAFT MOTORWY tadiavinao
Ireto ny vidiny ambany, motera roa avo lenta avo roa miaraka manerantany. Raha te hividy moto 150 rpm dual shaft roa ianao dia misafidy motera 150 rpm dual shaft. “Motor roa roa” misy “shafte roa” iray izay mivoaka ny raharaha môtô. Motera misy matevina 1 PM6/1PM4 - Fanohanan'ny indostria.
Raha manana fanontaniana ianao dia afaka mifandray aminay ihany koa, dia ho faly hanampy anao izahay! Ny serivisy ho an'ny mpanjifa dia an-tserasera mandritra ny andro. Ny traikefa amin'ny famokarana môtôta taona dia manome anao moto kalitao sy maharitra kokoa. Jereo eto ny mpanamboatra Double Shaft Motor, Dual Shaft Motors.
Mikaroka & ampitahao ny motera Siemens rehetra miaraka amin'ny fanombantombana ara-teknika feno ihany amin'ny matrix Industrial. Manana ny katala moto elektrika an'ny Siemens rehetra misy izahay, General Spesifikant Horsepower: 20 hp Volava: 410 volts Fasa: 3 RPM: 1755 rpm Frame: 215TZ.